တောင်ကြီးမြို့မှာ ပြုလုပ်သွားမဲ့ Food Startup Booster Program – Impact Hub Yangon
သင့်မှာ ကိုယ်ပိုင်စားသောက်ကုန် ထုတ်လုပ်ဖို့အတွက် စိတ်ကူးသစ်များ ရှိသလား
Food Startup Booster Program မှဈေးကွက်အသင့်ဖြစ်တဲ့ စားသောက်ကုန်များအဖြစ်ကို ပြောင်းလဲပေးဖို့အတွက် အခြေခံအစားအသောက်ပြုလုပ်နည်းရှိပြီးသားအစားအသောက် ထုတ်လုပ်ဖို့ စိတ်ကူးရှိတဲ့ စားသောက်ကုန်ထုတ်လုပ်သူများကို ရှာဖွေနေပါတယ်
ဒါဆို ဈေးကွက်အသင့်ဖြစ်တဲ့ စားသောက်ကုန်ဖြစ်အောင် Food Startup Booster Program ကဘယ်လိုလုပ်ဆောင်မလဲ
သင့်ရဲ့ ရှိပြီးသားအစားအသောက်ပြုလုပ်နည်းကို အသင့်ထုတ်လုပ်နိုင်မဲ့ ထုတ်ကုန်ဖြစ်အောင် အကူအညီများနှင့် အတူတကွလုပ်ဆောင်သွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
စားသောက်ကုန် နည်းပညာရှင်ရဲ့ အကူအညီများနဲ့ သင်ထုတ်လုပ်မဲ့ စားသောက်ကုန်ကို စမ်းသပ်ထုတ်လုပ်နိုင်မဲ့နေရာမှာ အခမဲ့စမ်းသပ်ထုတ်လုပ်ခွင့် ရရှိမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
သင့်စားသောက်ကုန်လုပ်ငန်းသစ်အတွက်လိုအပ်မဲ့ စိတ်ကူးထုတ်ခြင်း၊ စီးပွားရေးပုံစံငယ် ဖန်တီးခြင်း၊ ငွေကြေးစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းတို့အတွက် အခမဲ့သင်တန်းများ ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။
ဒါ့အပြင် သင့်ရဲ့ထုတ်ကုန်ကို ပြင်ပဈေးကွက်သာမက အွန်လိုင်းဈေးကွက်အတွင်းသို့ ထိုးဖောက်မဲ့ နည်းလမ်းများလည်းလေ့လာခွင့်ရရှိမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီပရိုဂရမ်ကို လျှောက်ထားဖို့အတွက် ဘာတွေလိုအပ်မလဲ
စားသောက်ကုန်စိတ်ကူးသစ်ရှိပြီးသားဖြစ်ပြီးတော့ အိမ်မှာပဲ အစမ်းထုတ်လုပ်ထားတဲ့ စားသောက်ကုန်များ ရှိရပါမယ်။
ဒီပရိုဂရမ်ကို တောင်ကြီးမြို့တွင် ပြုလုပ်သွားမည်ဖြစ်သောကြောင့် တောင်ကြီးမြို့တွင် လူချင်းတွေ့၍ပြုလုပ်သွားမည် ၅ရက်တာသင်တန်းကို တက်ရောက်နိုင်မှသာ လျှောက်ထားကြရန် တိုက်တွန်းပါတယ်။ (တောင်ကြီးမြို့နဲ့ အနီးတစ်ဝိုက်တွင် နေထိုင်သောသူများဆိုလျှင် အဆင်ပြေပါသည်။)
ပရိုဂရမ်ကိုအဆုံးထိတက်ရောက်နိုင်ပြီး လှုပ်ရှားမှုများမှာ ပါဝင်နိုင်သူဖြစ်ရပါမယ်။
ဆန်းသစ်ပြီး ကွဲပြားတဲ့ထုတ်ကုန်စိတ်ကူးရှိမယ်ဆိုရင် အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်။
ဒီပရိုဂရမ်က ဘယ်လိုပြုလုပ်သွားမလဲ? ဘယ်လောက်ကြာမလဲ
ဒီပရိုဂရမ်မှာ အပိုင်း(၂) ပိုင်းပါပြီးတော့ စုစုပေါင်း (၁၁) ရက်တာကြာမြင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ ပရိုဂရမ်ပထမပိုင်းမှာ စီးပွားရေးနဲ့ပက်သက်တဲ့ စိတ်ကူးထုတ်ခြင်း၊ စီးပွားရေးပုံစံငယ်ရေးဆွဲခြင်း၊ ငွေကြေးစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း နဲ့ ဈေးကွက်ထိုးဖောက်ခြင်းအစရှိတဲ့ စီးပွားရေးနဲ့ ပက်သက်တဲ့ အကြောင်းအရာများကို အွန်လိုင်း အစည်းအဝေးများနဲ့ လေ့လာရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ပရိုဂရမ်ဒုတိယပိုင်းကိုတော့ တောင်ကြီးမြို့တွင် လူချင်းတွေ့ဆုံပြီး ထုတ်ကုန်တိုးတက်မှုနဲ့ ပက်သက်တဲ့အကြောင်းအရာများကို သင်တန်းများပေးသွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက် ကိုယ်ပိုင်စားသောက်ကုန် ထုတ်လုပ်ဖို့စိတ်ကူးသစ်ရှိတယ်ဆိုရင် လျှောက်ထားလိုက်ပါတော့နော်။
ဒီပရိုဂရမ်ကို လျှောက်ထားဖို့ စိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုရင် https://bit.ly/FoodStartupBoosterProgram ကို ဒီဇင်ဘာလ (၃) ရက်နေ့၊ သောကြာနေ့၊ ၂၀၂၁ နောက်ဆုံးထားပြီး လျှောက်ထားလိုက်တော့နော်။
Previous The Innovate to Nourish (I2N) Myanmar Challenge 2021 Final Pitching Competition
Next Only3Days left to Application Closing!
Come and Work at Co-working Space with only 30,000 MMK until April 2022!
The Innovate to Nourish (I2N) Myanmar Challenge 2021 Final Pitching Competition